China SEBIC futuristic guta nyowani nyanzvi dzemabhegi fekitori uye vagadziri | Kusekerera
Saizi ye Wheel 26 ″
Motokari Brushless, 36V 250W Rear mota
Model Nhamba BEF-SC26RM
Chimiro 26 * 1.75 ″ aruminiyamu chiwanikwa 6061, TIG welded
Forogo 26 * 1.75 ″, simbi, TIG yakasungwa
Akaputsa PROMAX V Brake
Tire INNOVA 26 * 1.75 ″ A / V Nhema
Svika kubasa nekukurumidza uye wakasununguka neiyo yekupedzisira SC26. Dhizaini inesimba yemazuva ano inosanganiswa nemota yakasanganiswa uye bhatiri inopa iyo Gazelle Ultimate SC26 kuvapo kunoshamisira asi kwakanaka. Iyo aruminiyamu furemu yakanyanyisa kugadzikana, iyo inoshandura mukuita kwemitambo nekubata kwakanyanya. Kuwedzera kune epamusoro-giredhi yezvinhu, yakanyanya nyaradzo nhanho yakave yakawanikwa nekushandisa ponji-inodzivirira matairi, ergonomic handlebar kubata, uye kumbomiswa kumberi kweforogo.
- Yakanaka asi yemitambo kuchovha nerubatsiro rwakasimba kusvika pa28 mph.
- Yakakwirira nyaradzo nhanho pane yakasarudzika nzira yemugwagwa nekuda kweiyo yakatanhamara kumbomiswa pamberi peforogo.
- Relaxed posture inosanganiswa neine simba kuita zvinoreva kuti hapana rwendo rwuri kure zvakanyanya.
- Dhizaini, kusanganisa, uye kunyaradza: Yekupedzisira SC26 Speed ​​ine zvese.
Pashure: SEBIC nyowani mwenje unonakidza 20 inch kupeta mini emagetsi bhasikoro
Zvadaro: SEBIC Yakakwira simba mukadzi mugwagwa ebike